Let’s Build SDDC with vCloud Suite – NEX4 Blog
Let’s Build SDDC with vCloud Suite
– Software Define Data Center တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် vSphere Environment ပေါ်အခြေခံတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သော “vCloud Suite” နဲ့ ဘယ်လိုတည်ဆောက်သွားမလဲ ဆိုတာ ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမယ်။
– vSphere ကို အခြေခံတဲ့ Private Cloud မှာ Workloads တွေကို Run နိုင်ဖို့အတွက် vCloud Suite က Build လုပ်တာ Manage လုပ်တာတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
– vCloud Suite တစ်ခုမှာတော့ Components တွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ SDDC တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ မိမိတို့ DC Environment ကို ကောင်းစွာ Manage and Control လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
➡ vCloud Suite ရဲ့ Components
– Servers တွေ Bare-Metal Virtualization အတွက် Provide ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
– Bare-Metal Virtualization ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Hardware ကုန်ကျမှုတွေ သက်သာစေပြီး Applications များစွာကို မောင်းနှင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2️⃣ vCenter Server
– vSphere Environment ကို Centralized Platform အနေနဲ့ Control နဲ့ Manage လုပ်နေနိုင် ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
– အရေးကြီးတာကတော့ vCenter Server ကSDDC တည်ဆောက်ရာတွင် အရေးကြီးဆုံး Core Infrastructure ဖြစ်ပါတယ်။
3️⃣ vCenter Site Recovery Manager
– Disaster Recovery လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် Provide ပေးပါတယ်။
– DR အတွက် Automated and Orchestration ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
4️⃣ vRealize Automation
– vRealize Automation ဆိုတာကတော့ Secure Self-service Portal လို့တင်စားလို့ရပါတယ်။
– Authorized Admin (သို့မဟုတ်) Developers (သို့မဟုတ်) Business Users တွေက IT Services တွေ IT Resources တွေကို Portal မှတစ်ဆင့် Request စလုပ်လို့ရပါတယ်။
– ထို Request တွေပေါ် မူတည်ပြီး Policy-Based Infrastructure တစ်ခုအနေနဲ့ Appliactions တွေကို Provisioning လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Lifecycle တစ်ခုအနေနဲ့ ဖော်ပြရမယ် ဆိုရင်
5. Expire/Lease/Archive ဆိုပြီး အဆင့် ၅ ဆင့်ရှိပါတယ်။
5️⃣ vRealize Business for vSphere
– IT Services နဲ့ ကုန်ကျသော Cost ကို Transparency ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ ကောင်းစွာ Control လုပ်နိုင်ပါတယ်။
– Auomatically Cloud Cost ကို Analysis လုပ်နိုင်ခြင်း၊ Cost Visibility နဲ့ Business Insights တွေကို Deliver လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။‍‍‍‍‍‍
1. ပထမအနေနဲ့ Business Unit တွေကို Define လုပ်ထားရမယ်။
2. ထို့နောက် Pricing Policies ကို Define လုပ်ရပါမယ်။
3. Consumption Report တွေကို ပြန် Check ရပါမယ်။
6️⃣ vRealize Operation Manager‍‍‍‍
– မိမိတို့ Infrastructure ရဲ့ Health ကို Checking လုပ်ရာတွင် Provide လုပ်ပေးပါတယ်။
– Unified Management အနေနဲ့ Performance, Capacity နဲ့ Configuration တွေကိုလဲ Checking and Management လုပ်နိုင်ပါတယ်။
– SDDC တစ်ခုထဲ မှာ ဖြစ်ဖြစ် Across Multi-cloud မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Monitoring လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
– Planning ကနေပြီးတော့ Capacity Optimization နဲ့ Compliance အထိလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
– ထို့နောက် Automated and Proactive Workloads Management အနေနဲ့လဲ Provide လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
7️⃣ vRealize Replication
– Replication လုပ်ရာတွင် အဓိကလုပ်ဆောင်ပေး ပါတယ်။ Datastore အချင်းချင်းကြားမှာ VM ရဲ့ Disk Level ကို Replicate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
➡ Network Components for vCloud Suite
Network Components တွေ အနေနဲ့ ကြည့်မယ် ဆိုရင် vMware NSX ကို Networking and Security အတွက် Adopt လုပ်လို့ ရပါတယ်။
NSX က layer2ကနေ Layer7အထိ Network Virtualization က ပံ့ပိုးနိုင်တယ်။ DC ထဲ မှာရှိတဲ့ Workloads တွေရဲ့ Network Provisioning အပိုင်းတွေ Security Policies အပိုင်းတွေနဲ့ Management အပိုင်းတွေကို ကောင်းစွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။
➡ Layers of the Software-Defined Data Center
1️⃣ Layer အနေနဲ့ဆိုရင် ပထမဆုံး Physical Compute, Storage and Network အပေါ်မှာ တင်ထားမဲ့ Virtualization အလွှာရှိမယ်။
2️⃣ Virtualization အလွှာ အပေါ်မှာမှ SDDC ရဲ့ Core Infra ဖြစ်တဲ့ Management, Performance တွေ Capacity တွေအတွက် Monitoring, Orchestration Layer ရှိပါတယ်။
3️⃣ နောက် Layer အနေနဲ့တော့ Infrastructure Service Layer လို့ ခေါ်တဲ့ Self-Service User Portal ကနေ Requested Resorces တွေကို Catalogs တွေ Template တွေ ဆောက်ပြီး ပေးသုံးတာမျိုး တွေ ရှိလာပါတယ်။ IaaS Environment လို့လဲ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
4️⃣ နောက်ဆုံးမှာတော့ Application Platform Service Layer လို့ခေါ်တဲ့ Self-Service Application Development အလွှာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ Application Blueprinting တွေ Application Deployment လုပ်ပေးတာတွေ ရှိလာပါတယ်။
ဖော်ပြပါ Layer တိုင်းကို vCloud Suite ရဲ့ Components တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး Build လုပ်ထားပါတယ်။ vCloud Suite Compomnents တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် SDDC ကို တည်ဆောက်နိုင်သလို Additional Public Cloud Capacity တွေ ထပ်ထည့်ပြီး vCloud Air လို့ခေါ်တဲ့ Services အသုံးပြုပြီး Other Public Cloud တွေကိုပါ Manage လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Result အနေနဲ့ Common vRealize Cloud Management Platform တစ်ခုကိုပဲ သုံးပြီး Hybrid Cloud ကိုပါ Manage လုပ်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
➡ vCloud Suite Use Cases
– Onpremise SDDC တည်ဆောက်ရာတွင် အကျိုးပြုခြင်း
– SDDC Primary Site အပြင် Disaster တစ်ခုခု ကြောင့် Fail ခဲ့ရင် Remote Site ဆီက Replicate လုပ်ထားနိုင်ခြင်း
– Remote တစ်နေရာရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် Cloud မှာ ဖြစ်ဖြစ် VM တွေကို အလွယ်တစ်ကူ Power ပြန် On ပြီး Failure မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ခြင်း
vRealize Suite ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် Benefits တွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်
– လျင်မြန်စွာ Changes တွေရှိနေပြီး Business လိုအပ်ချက်တွေ၊ Application လိုအပ်ချက်တွေ ရှိလာတဲ့ အချိန်မှာ Resources တွေ ထပ်ထပ်ပြီး တိုးရမှာတွေ များလာတယ်။ Resources Request တွေ ရှိလာရင် Automatically Deploy လုပ်လာနိုင်တဲ့ အတွက် Agility ကို Provide ပေးနိုင်ပါတယ်။
2️⃣ Simplicity and Empowerment
– Portal Based ကို သုံးတဲ့ အခါမှာ Friendly Users Experience ရှိစေတယ်။ လွယ်ကူတယ် မြန်ဆန်တယ်။ vRealize က IT Department, Management နဲ့ All Users ကြားမှာ “Win-Win-Win” အနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။
– လိုအပ်လာရင် Request လုပ်လို့ရတယ်။ အဲ့ Request ပေါ်မူတည်ပြီး Template တွေ ထားတာမျိုးနဲ့ Auto Deploy လုပ်တာတွေ ရှိတယ် ဆိုပေမဲ့ အကုန်လုံးကို Policy တွေ Rule တွေနဲ့ Control လုပ်ထားပါတယ်။ Organization ရဲ့ Compliance တွေနဲ့လဲ ကိုက်ညီမှုရှိအောင် Control လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အကျိုးကျေးဇူးတွေ များစွာရှိနေတဲ့ ဒီ Solution ကို Customer တွေဆီ အကောင်းဆုံး Services ပေးနိုင်ဖို့ NEX4 မှကျွမ်းကျင်သော Engineers များ၊ အတွေ့ အကြုံများးသော Engineer များနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။